टिप्स : यसरी सेक्स गर्दा खुसी हुन्छन् महिलाहरु – rastriyakhabar.com
टिप्स : यसरी सेक्स गर्दा खुसी हुन्छन् महिलाहरु
१. डगि आसनः महिला हुरुक्कै हुने यो आसनमा पुरुषले महिलाको पछाडी भागबाट सेक्स गर्दा रमाइलो मान्छन् । जसले गर्दा महिलाको यौन अंगमा पर्याप्त घर्षण हुन्छ । सम्भोगका बेला यो आसनमा महिलालाई चरम आनन्द प्राप्त हुन्छ । यो आसनमा महिलाले चाहने लोकप्रिय आसन हो ।
२. आंखा जुधाएर गरिने आसनः महिला र पुरुषमा यो आसन सामान्यतया परिचित आसन हो । अल्छिलाग्दो भएपनि सामान्यतथा सम्भोगको सुरुवात यही आसनबाट हुने गर्दछ । आधुनिक महिलामा यो आसन लोकप्रिय मानिन्छ । महिलाले यो आसनका क्रममा यौन साथीसंग आंखा जुधाउंन पाउंदा धेरै सन्तुष्ट हुन्छन् ।
३. काउगर्ल आसनः यो आसन महिला पुरुषको उत्तेजनालाई चरम उत्कर्षमा पुर्याउने आसन हो । सम्भोगका समयमा महिलाले पुरुषलाई जिस्काउन मन पराउंछन् । महिला यो आसन अन्र्तगत पुरुषको शरीर माथि बसेर उफ्रीन मन पराउंछन् । महिलाको क्रियाकलाप बढि हुने यो आसनमा पुरुषको भुमिका निक्रिय जस्तै हुन्छ । महिलाले आफ्नो इच्छा पुरुष यौन अंग खेलाएर चरमसुख लुट्ने गर्दछन् ।
४. चम्चा आसनः महिलाको शरीरमा पछाडिबाट पुरुष चम्चा जस्तै खप्टीएर सम्भोग गरिने यो आसनमा सरल तथा सजिलो हुन्छ । यो आसनमा पुरुषको यौन क्षमता बढ्छ र सम्भोगको समय बढ्छ । महिलाले यो आसनमा पुरुषबाट केही फोहोरी व्यवहारको आशा गर्ने गर्दछन् ।
५. उठेर गर्ने आसनः कहिलेकाही महिला सम्भोगको समयमा खाटबाट उफ्रने र उठेर गर्न मन पराउंछन् । यो आसनमा महिला उठेर नै पुरुषबाट आफुलाई सम्भोग गराउन चाहन्छन् । यो आसन अन्र्तगत सामान्यतया महिलाहरु डायनिङ टेबुलमा सम्भोग गर्न रुचाउंछन् ।